Mogadishu Journal » 2019 » July » 11
Mjournal :-Hay’adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA, ayaa maanta shaaca ka qaadday in gacanta lagu dhigay Rag qorsheynayay weeraro iyo hubkii ay wateen,kaddib howlgal ay ciidammada amniga ka fuliyeen dulleedka Muqdisho. Labo nin oo lagu soo qabtay...
Mjournal :-Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa maanta guddoomiyay shirka golaha wasiirrada oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulanka ay golohu yeesheen ayaa looga hadlay sharciga difaaca qaranka iyo siyaasadda daryeelka bulshada oo ay soo...
Mjournal :-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu ka tiiraanyeysan yahay shaqaaqada iyo colaadda dadka walaalaha ah ee ka socota deegaanka Ceel-Afwen ee Gobolka Sanaag, taas oo sababtay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh....
Mjournal :-Maamulka Gobolka Banaadir aya Maanta Saldhiga Galbeed ee degmada Dharkeenleey waxaa ay kusoo bandhigeen 6 ruux oo lagu eedeeyay inay ahaayeen Burcad iyo hub ay wateen,kuwaas oo Maamulka Gobolka Banaadir uu sheegay in lagu soo qabtay howlgal laga sameeyay Magalada...
Mjournal :-Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Dastuurka oo ay wehliyaan La-taliyayaal iyo Agaasime-waaxeedyo katirsan Wasaaradda Dastuurka, ayaa shalay kulan la yeeshay Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada Qaranka oo ay wehliyaan Agaasime-waaxeedyo katirsan Mdaxtooyada Qaranka iyo...
Mjournal :-Dowlada Federalka Soomaaliya ayaa beenisay inuu jiro kulan ay Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya ku yeelanayaan 13ka bishan magaalada Addis Ababa. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay in uusan jirin kulan u qorsheysan Madaxweynaha...
Mjournal :-Madaxweynaha Nigeria, Muhammadu Buhari ayaa ammaanay guusha ay gaareen xulka qaranka Nigeria isla markaasna ku tilmaamay kuwo aanan laga adkaan karin. Waxaa uu sheegay in dhammaan shacabka dalkiisa ay dhuur sugayaan natiijada ay xulka qaranka kasoo hoyiyaan Koobka...
Mjournal :-Waxaa sii xoogeysanaya khilaafka u dhaxeey xildhibaanada Barlamaanka Hir-Shabelle,kuwaas oo kala taageersan guddoomiyaha Baarlmaanka Hir-Shabeelle Cusmaan Barre Maxamed iyo gudodomiye kuxigeenka Baarlamaanka Canab Axmed Ciise. Khilaafka ayaa salka ku haya kulamada...
Mjournal :-Wasiiro ka tirsan Puntland oo caawa shir jaraa’id qabtay ayaa Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ku eedeeyay inuu baal maray jadwalkii ay ku heshiiyeen ee loo dejiyey soo dhoweyntiisa Woqooyiga Magaalada Gaalkacyo, iyadoo booqashadaasina ku sifeeyey mid fowdo aheyd....